N’Golo Kanté oo go’aamiyay wararka la xiriira inuu ka tagayo kooxda Chelsea – Gool FM
N’Golo Kanté oo go’aamiyay wararka la xiriira inuu ka tagayo kooxda Chelsea
(London) 04 Seb 2020. Xiddiga qadka dhexe reer France iyo kooxda Chelsea ee N’Golo Kanté ayaa go’aamiyay wararka la xiriira inuu ka tagayo garoonka Stamford Bridge xagaagan.
N’Golo Kanté ayaa loo arkaa mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee kooxda Inter Milan, halka wargeyska “Calciomercato” uu xaqiiiyay in ciyaaryahanka uu durbaba qaatay go’aankiisa isla markaana uu u sheegay tababaraha Blues ee Frank Lampard.
Wararka ka imaanaya Talyaaniga ayaa waxay sheegayaan in laacibku uu aad iyo aad uga sii fogaanayo kooxda Inter Milan, maadaama uu Kanté u muuqdo inuu diyaar u yahay inuu la sii joogo Chelsea, isagoo kala hadlay Frank Lampard inuu diyaar u yahay inuu sii joogo London.
Sidoo kale, N’Golo Kanté wuxuu albaabka u furay inuu saxiixo qandaraas cusub uu ku sii joogayo Chelsea ilaa iyo 2023, taasoo sanad cusub ku dareysa qandaraaskiisa haatan, oo dhacaya 2022, go’aankan ayuu wuxuu gabi ahaanba carqaladeynayaa rajadii laga qabay ciyaaryahanka inuu u dhaqaaqo naadiga Nerazzurri.
Ciyaaryahankii hore ee Leicester City ayaa u muuqda mid sii joogi doono kooxdiisa haatan ee Chelsea xilli ciyaareedka cusub, haddii aysan dhicin wax la yaab leh inta ka hartay suuqa kala iibsiga kahor inta uusan xirmin.
“Waxaan rajeynayaa inuusan Messi imaanin horyaalka Premier League” – Robertson